မြောက်ဦးမြို့အတွင်း လက်နက်ကြီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ် ၊အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ ကလေးငယ် နှစ်ဦးသေဆုံး
မြောက်ဦးမြို့အတွင်း လက်နက်ကြီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ် ၊အမ...
3 ธ.ค. 2562 - 00:03 น.
မြောက်ဦးမြို့ အလယ်ဈေးရပ်ကွက် မှာ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီကျော်ခန့်က ပေါက်ကွဲမှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားပြီး အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး တစ်ဦးနဲ့ ကလေးငယ်နှစ်ဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့သူ မျက်မြင်အမျိုးသမီးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရသူလေးဦးခန့်ရှိပြီးတော့ သူတို့ထဲက တစ်ဦးကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေနေ ရှိတယ်လို့ လည်း မြောက်ဦးခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးကဘီဘီစီကို ပြောပါတယ် ။
ဒေသခံတွေက လက်နက်ကြီးကျည်ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာ လို့ပြောပြီး နေအိမ်ခြံဝင်းတစ်ခုအတွင်းမှာ ကစားနေကြတဲ့ ကလေးငယ်တွေ အပါအဝင် အမျိုးသမီးတွေ ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သေဆုံးသွားတဲ့ ၃ ဦးက အသက် ၅လအရွယ် အသက် ၃နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ် ကလေးတွေဖြစ်ပြီးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နေရာမှာ သေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် မနုနုဝင်းကတော့ ဆေးရုံပေါ်မှာ သေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းသာစိန်ကတော့ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ မှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ သတင်းအတိအကျမရရှိသေးတဲ့ အတွက် အခြေအနေမှန်ကိုမသိရှိရသေးဘူးလို့ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ညနေပိုင်းက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းဦးစီး ပထမတန်း ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းဇော်ဦးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တာမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ လက်နက်ကြီးကျည်ကျရောက်ပေါက်ကွဲတာမဟုတ်ဘဲ လက်ပစ်ဗုံးပေါက်ကွဲတာဖြစ်တယ်လို့ အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီလက်ပစ်ဗုံးဟာ ရွာသားတစ်ယောက်ရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရွာထဲမှာ ပေါက်ကွဲသွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ပစ်ဗုံးကို ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုရရှိလာခဲ့တယ်ဆိုတာကို သူ့အနေနဲ့လည်း မသိရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
"ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့ အဲ့ဒီနားမှာ လက်ပစ်ဗုံးကွဲတယ်လို့တော့ သိရတယ်။ အဲ့ဒီလူတွေက လက်ပစ်ဗုံးတွေ့လို့ ဆော့ရင်းနဲ့ လက်ပစ်ဗုံးထကွဲပြီးတော့ မှန်တယ်လို့သိရတယ်။ အဲ့ဒီလက်ပစ်ဗုံးကို ဘယ်ကရလဲဆိုတာ ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး"လို့ ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းဇော်ဦးက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒေသခံတွေဘက်ကတော့ လက်နက်ကြီးကျည်ကျေးရွာအတွင်းမှာ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်အခုလို ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ ပြောဆိုပေမယ့် တပ်မတော်ဘက်ကတော့ ကောက်ရလာတဲ့ လက်ပစ်ဗုံးကိုဆော့ကစားရာမှာ ပေါက်ကွဲတာလို့ ပြောဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြောက်ဦးမြို့နယ် မြောက်ဘက် မိုင် ၂၀ ကျော်အကွာ ရမ်းချောင်းအထက်ပိုင်းကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်တဲ့ မြိုတိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ နားလိပ်ကျေးရွာအတွင်းကို ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီခွဲလောက်မှာ လက်နက်ကြီးကျည်တစ်လုံး ကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ လူငယ်တစ်ဦး ထိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
နားလိပ်ကျေးရွာနဲ့ အရှေ့ဘက် တစ်မိုင်ခန့်အကွာ ရမ်းချောင်းအထက်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်းက တောင်တန်းတွေမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းကနေ တပ်မတော်နဲ့ အေအေတို့အကြား တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့နေ့လည်ပိုင်းမှာ အဲ့ဒီက ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ လက်နက်ကြီးကျည်တစ်လုံးဟာ နားလိပ်ကျေးရွာအတွင်းကို ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းဦးစီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဇော်ဦးကတော့ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် နေ့မှာ မြောက်ဦးမြို့နယ်နဲ့ ပလက်ဝမြို့နယ်တွေအတွင်းမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘူးလို့ ငြင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေတို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်ဟာ ၁၀၀ ကျော်အထိရှိနေပြီလို့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ စာရင်းဇယားတွေအရ သိရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မြောက်ဦးမြို့အတွင်း လက်နက်ကြီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ် ၊အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ ကလေးငယ် နှစ်ဦးသေဆုံး